♬သားကြီး♪: မလေး လေးလေး..လေးတယ်ဗျာ
ဒီခေါင်းစဉ်ဟာ ကျနော့်ခေါင်းစဉ်မဟုတ်ပါ ဖတ်ဖူးသည့်ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်၏ခေါင်းစဉ်သာဖြစ်သည်
မလေး-မြန်မာ စကားပြောလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တော်တော်များများ၏အဖွင့်မိတ်ဆက်စာတို့တွင်၎င်း မလေးနိုင်ငံထုတ်မြန်မာမဂ္ဂဇင်းများ၏ စာညွှန်းတို့တွင်၎င်း အမြဲတွေ့ရတတ်သည့် “မလေးရှားနိုင်ငံသည်မည်မျှသာယာဝပြောပုံ ၊မလေးနိုင်ငံတွင်မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားများသည် စိတ်သဘောထားမည်မျှပြည့်ဝပုံ တိုင်းတစ်ပါးသား(Foreigner)အပေါ်တွင် မည်ရွေ့မည်မျှ ဖေါ်ရွေကြင်နာတတ်ပုံ”များကိုတွေ့ရတိုင်း ကျနော့ရင်ထဲတွင် ရယ်ချင်စိတ်တို့သည် အလိပ်လိုက်အလိပ်လိုက်တက်လာလေ့ရှိသည် ၊လူတကာပြောလေ့ရှိသည့် “ရယ်ချင်ပက်ကျိ”ဆိုတာဖြစ်မည်ထင်သည်။
ထိုသို့တွေ့ရတိုင်းပေါသွပ်ကာတွန်းထဲကလို“ရယ်ရတယ်ဗြဲ” ဟုလည်း တခါတခါ အသံကျယ်ကြီးဖြင့် ထအော်လိုက်ချင်သည်..
ယခု ကျနော်ရေးမည့်စာသည် ထိုစာများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည် အမှား/အမှန် ကို မလေးတွင်နှစ်ရှည်လများနေထိုင်ဖူးပြီး မလေးနိုင်ငံသားတို့နှင့် ထဲထဲဝင်ဝင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖူးသည့် မလေးပြန်များနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြပါကုန်....။
ကျနော်သည်စာရေးဆရာမဟုတ်သဖြင့်စာကိုလှပအောင်တန်ဆာဆင်မရေးတတ်ပါ လိုရင်းတိုရှင်းဖြင့်ရှင်းရှင်းဘွင်းဘွင်းရေးပါမည် တချို့နေရာများတွင်ရိုင်းသလိုဖြစ်နေလျှင် ကျနော့်၏အရေးအသားမတတ်မှုကြောင့်သာဖြစ်ပါသည် နားလည်ပေးကြပါကုန်...။ ။
၁ ။ မလေး=စောက်ပျင်း
၂ ။ တရုတ်=???`
၃ ။ ကုလား=ခွေးလိုမိုက်ရိုင်းသည့်အကောင်နှင့်
၄ ။ဆာဗား(Sabah)=အဲဗားမူး အဲဗားရစ် ဟူ၍ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် (တရုတ်ကိုကွက်ရှင်မတ်နှင့်ရှော်ထားရခြင်းမှာ တရုတ်အကြောင်းမကောင်းပြောစရာမရှိ၍မဟုတ် ၊များလွန်း၍ဘယ်ကစပြောရမည်မသိ၍သာဖြစ်သည် ခုလက်ရှိသူတို့နှင့်လက်တွဲအလုပ်လုပ်နေရတုန်းမို့လည်းဖြစ်သည် အိမ်ပြန်ရောက်မှ တရုတ်အတင်းဆက်တုပ်မည်)
ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏စောင်မကြည့်ရှုမှုကြောင့် တနေ့တနေ့ ငပျင်း ဘဝသို့အရှင်လတ်လတ်ကူးပြောင်းကြသူ မနည်းပေ
မလေးနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာသူသည် အမှန်ပဲဖြစ်ဖြစ် မမှန်ဘဲဖြစ်ဖြစ် မလေးလူမျိုးများသောရပ်ကွက်တွင်မနေသည်က အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် သူတို့သည် ထစ်ကနဲဖြစ် complainတက်ဖို့သာတတ်နိူင်သူဖြစ်သည်၊ သူတို့complainတက်ပြီဆို ကားနီ ကားပြာလေးတွေရောက်လာပါလိမ့်မည် လိုက်ဖို့သာပြင်ပေရော့...။
မလေးလူမျိုးမောင်းနှင်သော တက္ကစီများကိုလည်း ရှောင်နိုင်လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် အတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောပြပါမည်
အရင်ပီနန်မှ KLကိုတက်လာခါစကဖြစ်သည် ကားထဲတွင်ကျနော်နှင့်အသိလေးယောက်ပါလာသည် ကံဆိုးချင်တော့မလေးတက္ကစီကိုမှ လာခေါ်သည့်ပွဲစားကငှားမိလေသည် လမ်းတလျှောက်လုံးပြောလာလိုက်သည့်စကား လုံးဝလူကြီးလူကောင်းရုပ် ခွေးစိတ်ပေါက်နေသည်ဟုထင်စရာမရှိ
..“ကျနော်တို့ဘဝသည် သနားစရာကောင်းကြောင်း.. နိုင်ငံသယံဇာတပေါပါလျှက်နှင့် အောက်ကျနောက်ကျခံပြီး သူများတိုင်းပြည်တွင်အလုပ်လုပ်ရကြောင်း ထို့ကြောင့်ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် မသုံးမဖြုန်းဘဲရသမျှခြစ်ခြုတ်စုကာ အိမ်ကိုပို့သင့်ကြောင်း တစ်လမ်းလုံးပြောလာသဖြင့် ထိုလူကြီးအပေါ် အထင်ကြီးကြည်ညိုစိတ်များပင် ပေါက်လာတော့သည်
(မှတ်ချက်=ထိုစဉ်က မလေးဘာသာစကားကျနော်နားမလည်ပါ ပွဲစားလူက ကားထဲ၌ ရှင်းပြ၍သာ သိရခြင်းဖြစ်သည်)
ဤသို့ဖြင့် အထင်ကြီးရင်း လေးစားရင်း ကြည်ညိုရင်း တန်းလန်းနှင့်ပင် ကျနော်တို့အား ဓါးပြတိုက်လေတော့သည်
စစချင်းနားမလည် ပွဲစားလူက မျက်စိမျက်နှာပျက်နှင့်ပြောတော့မှသိတော့သည် ပါသမျှအကုန်ပေး... မပေးရင် ရဲစခန်းမောင်းပို့မည်ဟူသတတ် ပါမစ်မှန်သည်ထားဦး ရဲစခန်းတော့အရောက်မခံနိုင် စကားလည်းမတတ် ရောက်စဆိုတော့ကြောင်တောင်တောင် ၅ယောက်နှင့်၁ယောက် ကားထဲမှာသူပြုသမျှနုရသည် ရှက်ဖွယ်ကောင်းလေစွ
ပါလာသည့်အိတ်အကုန်မွှေနှောက်သည် နောက်ပိုက်ဆံအိတ်တောင်းသည် ရှိသမျှပိုက်ဆံအကုန်ယူပြီးအခွံချည်းပြန်ပေးသည်
ကျနော့အလှည့်ရောက်တော့ တက္ကစီသမား၏စောက်ခွက်ဝင်းလက်သွားသည် ကျနော့ပိုက်ဆံအိတ်သည်ဖေါင်းကားနေ၍ဖြစ်သည် သို့သော်… ဝင်းလက်နေသည့်စောက်ခွက်ချင်ခြင်းပြန်ပြီး ချီးထိသလို မှောင်ကျသွားသည် သူမျှော်လင့်ထားသည်က ငွေစက္ကူရွက် ထွက်လာသည်က မိန်းမချောလေးတစ်ဦး၏ဓါတ်ပုံနှင့် သူနားမလည်နိုင်သည့်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားထားသည့် စာရွက်များသာ ထိုမိန်းမချောလေးသည် ကျနော်အသက်တမျှမြတ်နိုးခဲ့ရသော တနေ့တွင် သာယာသည့်ဘဝတစ်ခုကိုအတူတကွ လက်တွဲတည်ဆောက်ရန်ဂတိတွေ အပြန်အလှန်နှင်းအပ်ခဲ့ကြဖူးသော ကျနော့၏လုံမပျိုလေးဖြစ်ပြီး ထိုစာများကား ကျနော့်ကိုရွယ်စူးရေးသားခဲ့သော သူမ၏မေတ္တာစာများဖြစ်လေသည် ကျနော့ပိုက်ဆံအိတ်ကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့်ပြန်ပစ်ပေးသည် ထို့နောက်ကျနော်တို့အား ကားပေါ်မှဆင်းခိုင်းပြီး တစ်ရှိန်ထိုးမောင်းထွက်သွားသည်
ကျနော်တို့အားခေါ်လာသည့်လူလည်း သူခိုးပြေးမှထိုးကွင်းထတော့သည် “ငါကွာ… မင်းတို့ရှိနေလို့ပေါ့... ငါဖြဲလိုက်လို့ရတယ်... ငါလုပ်ထည့်လိုက်လို့ရတယ် ငါတစ်ယောက်တည်းဆိုပွဲပြီးပြီ မင်းတို့က မသွားတတ် မလာတတ် တစ်ခုခုဖြစ်ရင်အရင်ဆုံးမင်းတို့ပဲ ရွာပတ်မှာ မင်းတို့ကိုငဲ့ပြီးငါ့စိတ်ငါပြန်ထိန်းလိုက်ရတယ် ဒါတောင်တစ်ချက်တစ်ချက်လွတ်ချင်နေတာ..”
ရတယ်..ရတယ်.. ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်တယ် ပြေးတဲ့လူလည်းပြေးပြီ ဝဋ်ကြွေးလို့ပဲသဘောထားတယ်..
အရေးထဲ သူ့ဒေါသကိုပြန်ပိတ်ပေးရသေးသည်.... ခုကျနော်တို့ကြုံခဲ့သလိုအလားတူအဖြစ်အပျက်ပေါင်း အမြောက်အများရှိလေသည် မလေးတက္ကစီသမားများသည် ကြုံရင်ကြုံသလို အခွင့်အရေးသမားများသာဖြစ်သည် သူတို့၏အဓိကပစ်မှတ်မှာ နိုင်ငံခြားသား(Foreigner)များဖြစ်သည်.... မိန်းကလေးများ၏အတွေ့အကြုံကား ပို၍ပင်ဆိုးဝါး၏
မလေးရှားကကုလားမတွေလည်းချောမှာပဲလားမသိ...? ဘာရယ်မဟုတ် စိတ်ကူးယဉ်မိသည် ရုပ်ရှင်ထဲကလိုချောရင်တော့ အင်း???
ရောက်လာမှပဲ တက်တက်စင်လွဲတော့သည် ဆိုးလိုက်သည့်ရုပ် ဖျင်းလိုက်သည့်စိတ်ဓါတ် ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဖြင့်လူ့လောကထဲရောက်လာသည်မသိ လူဖြစ်ဖို့ပင်မတန်
မလေးရှားတွင် စားသောက်ဆိုင်လုပ်မည်စိတ်ကူးပါက ကုလားဒဏ်ကိုခံနိုင်ရန်အရင်ဆုံးကြိုးစားပေရော့
ကုလား၁၀ယောက်တွင် ၁၀ယောက်လောက်သောက်တတ်ပြီး ၁၀ယောက်ကမူးရင်ရစ်သူများဖြစ်သည် မမူးခင်ကလည်းရစ်ပါသည်
သုတို့သည် အုပ်စုဖွဲ့လျှက် လူမိုက်လုပ်ကြသူများဖြစ်သည် သေမထူးနေမထူးအများစုဖြစ်၍မည်သူမျှဖက်ပြိုင်ရန်မဖြစ်ကြ
ထိုအခါ အားလုံးကသူတို့ကိုကြောက်ရသည် အထင်ဖြင့်ပို၍ပင် ဆိုးကြတော့သည် အမှန်မှာ ချီးမှန်းသိ၍ရှောင်ကြခြင်းသာဖြစ်သည် ချီး မှန်းသိလျှက်နှင့် ဒေါသစိတ်ဖြင့် “ကဲဟာ.. ကဲဟာ” ဟုအော်ပြီးတက်နင်းရင်လည်း ခြေတောက်သာပေရော့မည် ထို့ကြောင့် တော်တော်များများကရှောင်သည်
လူတွေကရှောင် သူတို့ကဖြဲဖြင့် အဖြဲကြီးဖြဲနေကြလေရာ အပြဲကြီးလည်းပြဲကြလေသည် အကွဲကြီးလည်းကွဲကြလေသည်
တစ်ခါက တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင် ဗမာလင်မယားနှစ်ယောက်အလုပ်အတူတူလုပ်ကြလေသည်
လင်ကအဖျော်ဆရာဖြစ်ပြီး မယားကစားပွဲထိုးသည် တနေ့တွင် ထိုရပ်ကွက်၏လူမိုက်ကုလားသည် ထိုဆိုင်သို့လာရောက်စားသောက်သည်
လာရောက်စားသောက်သည်ဆိုခြင်းထက်လာရောက်ချီးပေခြင်းသာဖြစ်သည် ဆိုင်ထဲတွင်အေးဆေးမထိုင် ထိုမြန်မာမအားရိသဲ့သဲ့လုပ်နေသည် ရိသဲ့သဲ့လုပ်သည်ဆိုရာ၌ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းညစ်ညစ်ပတ်ပတ်များပြောပြီးလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်
ဗမာမကသည်းခံသည် ထိုအခါပိုပြီးအတင့်ရဲလာကာ လူမြင်ကွင်း၌ ဗမာမ ဖင်အားသူ၏ခွေးလက်ဖြင့်လှမ်းပွတ်လေတော့သည် အလွန်အောက်တန်းကျသည့်အပြုအမူဖြစ်သည် ဗမာမကလန့်သွားသော်လည်းဘာမှပြန်မပြောရဲ လင်လုပ်သူအားပြန်တိုင်ပြောသည် လင်လုပ်သူခမျာ မယားထိလည်းဓါးကြည့်၍မရပါ ကိုယ့်နိုင်ငံမှမဟုတ်ဘဲ
ထိုကုလားအားထိုသို့မလုပ်သင့်ကြောင်း အောက်သံကလေးဖြင့်ပြောရှာသည် ထိုအခါကုလားက အယုတ္တ အနတ္တပြန်အော်ဆဲပြီး ထိုင်နေသည့်ခုံဖြင့် လင်လုပ်သူ၏ခေါင်းအား ခွပ်ကနဲရိုက်ချလိုက်လေသည်
နဂိုကမှလူပျော့ ဟိုကတစ်ချက်ရိုက်ရော ခေါင်းကွဲပြီးသတိပါလစ်သွားတော့သည် ထိုအခါကုလားက လဲကျနေသူ၏မျက်နှာအား တံတွေးဖြင့်ထွေးပြီး “မကျေနပ်ဘူးလား? မကျေနပ်ရင်မင့်လန်ကျောက်အစိုးရကိုမင်းပြန်တိုင်ပြော ဒါငါတို့မြေကွ မင်းမယားကိုတောင်ဖာလုပ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ် နားလည်လား? ဟုအသံနက်ကြီးဖြင့်အော်လေသည်
မယားလုပ်သူက လဲကျပြီးသတိလစ်နေသည့်လင်အားငိုယိုပြီးထူရှာသည် သို့သော် မိန်းမအားဖြင့်မနိုင် အလဲလဲအပြိုပြိုဖြစ်နေသည် ထိုမြင်ကွင်းကိုပင် ဆိုင်တွင်းရှိအခြားကုလားတွေက ထိုင်ကြည့်ပြီးသဘောကျကာ တဝါးဝါးတဟားဟားဖြင့်ရယ်မောနေကြလေသည် အသည်းနာဖို့အလွန်ကောင်းသည်....
ထို့ထက်ပိုဆိုးသည်က ထိုကိစ္စအတွက်ဆိုင်ရှင်သည် မြန်မာလင်မယားအားအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်
အကြောင်းပြချက်ကား ဆိုင်ကို ကုလားထပ်၍အနှေက်အယှက်ပေးမှာကြောက်၍ဟူ၏ ။
စော်ကားတာလည်းခံရသေး စောက်လုပ်လည်းပြုတ်သေးဆိုတော့ မိအေးနှစ်ခါနာပေါ့ ကြားရသူတိုင်းအံတကြိတ်ကြိတ် တက်ခေါက်ခေါက်ဖြစ်ရသော်လည်း မည်သူမျှ ဘာမှမတတ်နိုင်
တချို့ကျလည်း မြန်မာပြည်မှာလူဖြစ်ရခြင်း၏နိမ့်ပါးလှသည့် ဘဝပေးကုသိုလ်အားကျိန်ဆဲကြသည်
တချို့ကလည်း မြန်မာပြည်မှအသက်ခပ်ကြီးကြီး မျက်နှာရူးတစ်ဦးအား အမည်ထုတ်ပြီးကျိန်ဆဲကြသည်
မှတ်ချက်။ ထိုမျက်နှာရူး၏နာမည်ကိုကျနော်ရုတ်တရက်မေ့သွားပါသဖြင့်မဖေါ်ပြနိုင်တော့သည်ကိုခွင့်လွှတ်ကြပါကုန်။ ။
(ဤစာကိုရေးသားပြီးonlineတွင် ခင်မင်ရသည့်သူငယ်ချင်းတစ်ဦးအားပေးဖတ်ကြည့်ရာ ၎င်းကစာကိုအဆုံးထိဖတ်ပြီး ကျနော့်အား you are so fuckin terrible ဟုလှမ်းရေးပါသည် နီးစပ်ရာသူငယ်ချင်းများကလည်း ဖတ်ပြီး “သားကြီး… မင်းတော့အစွန်းရောက်နေပြီ ပြုတ်ကျဖို့ပဲကျန်တော့တယ်” ဟုပြောပါသည်
ဘယ်သူတွေဘာပြောပြောပါ ဤစာကိုကျနော့အမြင်အတိုင်းကျနော်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရေးသားခြင်းသာဖြစ်ပါသည် ဤpostအတွက် သဘောရိုးဖြင့်ဝင်ရောက်commentပေးသူအား၎င်း ၊သဘောဆိုးဖြင့်commentပေးသူအား၎င်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဖြင့်...။ ။ )
ဪ ဒုက္ခ ဒုက္ခ သူ့တို့ မကောင်းလို့ ဒီလိုဒုက္ခ တွေခံစားနေရတာပေါ့ဗျာ။
ဆက်ပါ ဆက်ပါ စောင့်နေပါတယ်၊ ဒါလေးတွေ က အမတို့လို မသိသေးသူတွေ အတွက် ဗဟုသုတပေ့ါ၊ ကျေးဇူး
မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး ခွက်ဆွဲတောင်းစားတာကမှ ပိုကောင်းပါဦးမယ်။ မလေးရှားမှာ အနှိပ်စက်ခံနေရသူတွေ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ကိုယ့်တိုင်းပြည်သာ ကိုယ်ပြန်ကြပါ။ သူများနိုင်ငံမှာ နေပြီး သူများ မကောင်းကြောင်း ပြောနေရင် ပြောတဲ့သူပဲ သိက္ခာကျပါတယ်။ ကျွန်ဖြစ်နေတာခြင်းတူတူ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာပဲ ကျွန်ပြန်လုပ်ကြပါ။ သာ၍မြတ်သေးသည်။
ဒီလို မျိုးတွေတော့ မြင်ဖူး ကြားဖူးပါတယ်...
သို့ပေမဲ့ နာတို့မြန်မာလူမျိုးတွ လာထိကြည့် မီးပွင့်သွားမယ် လို့မပြောနိုင်ဖူးယေ
အဲဒါတွေက သမိုင်းထဲမှပဲရှိဒယ်လေ.. စာတွေ ထဲမှာ မြန်မာဆိုတာ ဒီလိုမျိုးတွ ဆိုပြီးတင်ဒါပဲရှိတယ်ယေ တကယ်တော့ ဘုန်းကြီးကိုတောင်ပြန်သတ်တဲ့ လူတွေ မပြောတော့ပါဝူး...။
နေရာကောင်းရရင်တော့ အေးဆေးပေါ့.. လာမပြောနဲ့ ဌဲဌဲ..
ကျတော့်အလုပ်ကတော့ လူတိုင်း ကိုဖဲ့တယ် သူဌေးပဲ ကိုက်တယ် အဟဲအဟဲ..
မလေးဖြစ်ဖြစ် တရုတ်ဖြစ်ဖြစ် ဆာဘား ဖြစ်ဖြစ် “အ” ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ ဖြစ်ဖြစ် ကျတော့်အလုပ်လာလိုက်.... ခံရပြီသာမှတ်ကရော့..။
မလွယ်ပါလားဗျာ။ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး...။